Izinto Ezinhle Okufanele Zizenze eBraga, ePortugal
Izinto Ezinhlanu Eziphezulu Okuzokwenziwa EBraga, ePortugal
by UDavid Dean
Ayikho uhambo oluya enyakatho yePortugal ephelele ngaphandle kokuvakashela eBraga. Eyasungulwa eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili edlule ngumbusi wamaRoma wase-Augustus, idolobha lesithathu ngobukhulu kuleli lizwe linomlando omude wamasiko nenkolo, okuboniswa ekwakhiweni kwayo okukhulu kanye nedumela lobuzenzisi.
Yize kungenzeka ukuthi ubone okuningi kokukhangayo okuyinhloko kweBraga ohambweni lwezinsuku kusuka eProto esiseduzane, kungenzeka ngokufanayo ukuchitha ubusuku noma ababili ukuhlola idolobha nezindawo ezizungezile. Nazi izinto eziphezulu okufanele uzenze ngenkathi usedolobheni.
Ngena ngaphakathi kwe-Cathedral yaseBraga
Terry Eggers / Getty Izithombe
I-cathedral yaseBraga ilawula indawo yedolobha, futhi uzothola uhamba ngezinyawo ngezikhathi eziningana uma uhlola idolobha elidala le-compact. Izingxenye zibuye zafika ngekhulu le-11 leminyaka, futhi kungenzeka ukuthi isonto elidala kunazo zonke elisezweni.
Kusobala ukuthi akubuki okufana nalokho okwenza ngaleso sikhathi, noma kunjalo. I-cathedral ibuyiselwe futhi yanezelwa izikhathi eziningana phezu kweminyaka, futhi i-Baroque, i-Gothic, i-Romanesque, nezinye izitayela eziningi zokwakha zibonakala ngokucacile.
Musa nje ukuthatha izithombe zangaphandle, noma kunjalo. Thatha ithikithi emnyango, lapho ngama-euro amane uzothola ingaphakathi elithakazelisayo, kanye neyamamyuziyamu encane egcwele amasonto.
Uma usungaphakathi ngaphakathi, qiniseka ukuthi ubheke phezulu kokubili kwezitho zomuthi ezihlaba umxhwele. Ehlotshiswe kakhulu, zaziqoshwe ngawo-1730, futhi zilawula leyo ngxenye ye-cathedral. Futhi qiniseka ukuthi uhlola ama-cloisters ngenkathi ukhona, kanye nama-chapel amathathu aseduze.
Hlanganisa izinyathelo zokwenza uJesu enze i-Monte
Cmanuel Photography - Portugal / Moment / Getty Izithombe
Emaphethelweni edolobha kukhona ukukhanga okukhulu kakhulu kweBraga, i-Bom Jesus do Monte basilica-kanti izinyathelo ezingu-630 ezithinta ukuzitholela. Ngaphandle kokuba usuku lushisa kakhulu, ungakhathazeki ngokweqile mayelana nokukhuphuka, ngoba akulona kunzima njengoba kubonakala. Uma kubonakala sengathi kunzima kakhulu, kukhona i-funicular ene-powered water-eyona endala kunayo yonke emhlabeni-engakuthatha uye phezulu kusukela kuma-euro ambalwa kunalokho.
Emithonjeni engaqondakali ihamba ngezinyathelo, ezisekelwe ezinhlokweni ezinhlanu. Amanzi athululela kusuka e-orifice ngayinye imidwebo efanelwe ngumuntu, futhi ayithandwa ngokwabo.
Ngenkathi isonto le-neoclassical esiqongweni kungumgomo wokukhuphuka, imibono ejulile phezu komuzi nendawo ezungezile iyamangalisa ngendlela efanayo. I-cafe eseduze eseduze ithola iziphuzo ezibandayo kanye nokudla okulula, futhi kunezindlela nezitidi zokuhlola uma ungazange ugcwalise ukuhamba okwamanje.
I-Bom Jesus do Monte kulula ukufika ngemoto noma itekisi, noma nje ubambe ibhasi lezinombolo ezimbili kusuka kunoma iyiphi enye yezinyawo ezidolobheni. Ibhasi lithatha imizuzu engama-20, futhi ligijime njalo ngehora lesehora ngoMsombuluko kuze kube ngoMgqibelo, kancane kancane ngeSonto.
Phuza uVinho Verde ePraça da República
UJonathan Mitchell / Getty Images
Izwe lasePortugal ePortugal liyaziwa ngokukhiqizwa kwe- vinho verde . Iwayini eliluqabulayo, elincane-eliyisiphuzo eliyisiphuzo, liyisiphuzo esiphelele sasehlobo.
Hamba ePraça da República, thola itafula elingaphandle kwenye yezindawo zokudla eziningi, futhi ujabulele ingilazi noma ibhodlela lokungcebeleka nabangani. I-Vinho verde ivela ebomvu, i-rose, futhi ngokuvamile, izinhlobo ezimhlophe-"okuluhlaza" kulokhu kusho "osemncane," njengoba kuvame ukudla ngokushesha ngemuva kokubhoboza.
Uma usuqedile, thatha amaminithi ambalwa ukuhlola yonke indawo ye-plaza enkulu. Njengoba kwakhiwa izakhiwo ezinkulu ezungeze umthombo omkhulu, kuhlanganise nesonto laseCongregad kanye nalokho okusele ekugcineni inqaba yaseBraga, futhi kunabantu abaningi-ukubukela imini nobusuku ithuba lokulala, kunendawo enkulu yokuhlala.
Hlala eSanta Barbara Garden
I-THEGIFT777 / iStock Unreleased / Getty Izithombe
Elala eceleni komngcele omkhulu omdala wesigodlo-mbhishobhi wasendulo, i-Jardim de Santa Bárbara ehlanjululwayo iyindawo yokuvakashela izinyoni nabantu ngokufanayo. Ehlelwe eduze nesithombe se-saint yegama elifanayo, umklamo ukuhunyushwa kabusha kwamasimu okuhlala kule ndawo kusukela ngawo-1600.
Imibhede yembala emibalabala ingcono kakhulu entwasahlobo, kodwa ingadi kufanelekile ukuvakashelwa nganoma yisiphi isikhathi sonyaka. Kuncane kakhulu-imizuzu engu-10 noma engu-15 kwanele ukubona konke-kodwa kuyindawo enhle yokuhlala ne-pastry noma i-ayisikhilimu ngosuku olukhanyayo. Qinisekisa ukuthi uhlola izinsalela ze-arches ephakathi lapho ukhona!
Hlola amaSonto namasonto
Anders Blomqvist / Lonely Planet Izithombe / GettyImages
Njengoba kunikezwe umlando wakhe omude wenkolo, akumangazi ukuthi iBraga igcwele amasonto. Ungase uchithe izinsuku uzihlolisise zonke, kodwa kufanele uhlanganise okungenani eyodwa noma ezimbili ekuhambeni kwakho ngisho noma uhlala emahoreni ambalwa kuphela edolobheni.
Ngaphandle kwethempeli lihlala esontweni laseBraga's Misericórdia, futhi uma amasonto ahlotshiswe ngendwangu yinto yakho, nakanjani udinga ukuyivakashela. Ukwakhiwa kwaqala maphakathi nawo-1500, kodwa kungaphakathi kweBaroque kusukela eminyakeni eyikhulu kamuva okuhlala kuze kube yilolu suku. Indawo engemuva kwe-altare iyinhlangano ephawulekayo, ehlanganisiwe kuya edilini enezigqoko zegolide eziyinkimbinkimbi, izithombe eziqoshiwe, izimbali, nokunye okuningi. Ayikho imali yokufaka, nakuba iminikelo ivunywa njalo.
I-São Frutuoso isonto lihlala enyakatho yedolobha, hhayi eduze nenkundla yebhola. Isonto lama-18 lama-baroque linomdla okwanele ngokwalo, kodwa yi-chapel encane phakathi kwalokhu okukhanga ngempela. Yenziwe njengesiphambano sesiGreki, ibuyela kumaVisigoths ngaphezu kweminyaka eyizinkulungwane ngaphambili futhi ihlukaniswe njengesikhumbuzo sesizwe samaPutukezi.
Kuvulelekile emphakathini, kodwa kuzodingeka ukuthi uvakashe ngokuvakashela kwakho ngokucophelela-isonto livaliwe ngoMsombuluko, ngoLwesibili ekuseni, ngezimpelasonto, namaholide ambalwa omphakathi.
Thola Ukuphila Okumangalisayo Emsondolozweni WaseBiscaínhos
Anders Blomqvist / Lonely Planet Izithombe / Getty Izithombe
I-Braga inomcebo wamamyuziyamu, ngezihloko eziningi ezihlukahlukene. Enye yezindawo ezidume kakhulu yiMyuziyamu yaseBiscaínhos, ikhaya lomndeni ohloniphekile wendawo ezizukulwaneni eziningana. Indlu yokuhlala yayisezingeni eliphezulu kule minyaka eyi-17 neye-18, futhi iningi lomhlobiso nempahla yokufakelwa ngaphakathi kwesikhatsi kuze kube yilapho.
Ngenkathi ifenisha, izambatho, kanye ne-ceramics (kuhlanganise nehholo elizinikezelwe ama-azulejo tiles asePortugal elidumile) liyamangalisa, yizizathu ezinkulu zokuba umbukiso. Izitshalo zomhlanga kanye nemibhede yemifula zibhekwa njengenye yezibonelo ezisele kakhulu zensimu ye-Baroque-period, futhi zifanele kakhulu ukuvakashelwa ngisho noma ungenayo isikhathi sokuhlola imyuziyamu uqobo.
Ukungena emagcekeni akukhululekile, futhi ithikithi eya kumyuziyamu libiza ama-euro amabili anengqondo kakhulu. Ivaliwe ngoMsombuluko.
Chaves, Portugal Ukuvakasha Nezokuvakasha Imininingwane
Izincwadi zokudlela ezingu-8 zeMicrosoft-Izinkanyezi zokubhukuda ePortugal
Isiqondiso sokudla esifundeni sase-Portugal se-Alentejo
I-Funchal: I-Madeira Islands Travel Planner
Izikhangibavakashi e Top 5 e Aviero, Portugal
Ngabe umdayisi we-AZ kufanele adalule?
Amahora angu-48 eMinneapolis: Uhambo Oluphelele
Umhlahlandlela Wezimoto Zezomthetho eMinneapolis naseSt. Paul
Indlela Yokumamatheka Umama waseRussia (noma Ugogo)
Izitolo ze-Halloween eMinneapolis-St. UPawulu
Uthando I-Art Tribal? I-Gond Art Gallery yokuqala ezinikezelwe emhlabeni wonke e-India
I-Purrfect Parisians: Ukuhlola i-Cat Café eParis
Izinsuku ezingu-5 ezihamba phambili kunazo zonke ezinqabeni zase-Swiss Alps
Izindawo eziphezulu eziyisi-10 zaseMexico City
I-Ultimate Your Winter Vacation Winter
Kungani "uMasseur" Ebuyisela emuva
I-Fletchers Boat House eWashington, DC
Ukuhambela Ukuvakasha kweMontsegur, Ukugcina Okumnyama KwamaCathars
Izitolo Zomnyango waseParis neCosonon eDetroit, eMichigan